Umculi USikhosana Buhlungu Wamukela Inkomo Ezine Azinikezwe Ngabasekeli Bakhe
USikhosana Buhlungu wamukela isipho senkomo ezine, azithole emphakathini
Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine ngoMqibelo, phakathi kwazo kulenkabi eyodwa lenkomokazi ezimbili, emzini wakhe eGwamba eNkayi, okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini.
“Ezimbili useziphe amagama wathi eyinye nguQuiet eyinye nguZandile, uQuiet uthi thulani umsindo maGate-Keeper,’ kutsho uMadlela Sikhobokhobo umculi olodumo, ongumlingisi njalo engumahlekisa onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo eziphathelane lomculo wakhe.
Uthi kukhangelelwe ukuthi isibaya sikaSikhosana siqhele njalo kwakhiwe indlu yakulezi insuku emzini wakhe ngoba abamsizayo bephakathi kokuqhuba loluhlelo.
UMadlela uthi akuvamanga ukuthi abantu bephathise omunye ngalindlela, njalo akwenzakalanga lakuMajaivana owayelodumo, njalo mhlawumbe yikuqala kokuhle okuzakwenzakala kuSikhosana.
Igama lakhe ngokugcweleyo ngu Cleopas Buhlungu Sikhosana, owazalwa ngomnyaka ka1971, njalo olomculo odla ubhedu okwamanje othi "Dlala Ntethe," osubukwe ngabantu abafika phose inkulungwane ezingamatshumi ayisithupha 59, 379 ebulenjini be internet ku U-Tube.
“Ngifuna ukubonga isizwe..bangibonile ngisiyalanda umdala eNkayi, ngifuqwa ngokwakungifuqa---sayamlanda…akululanga ukuthi eseyiswa, kodwa abanye bebone efanele ukusizwa..... ngoba sathi nangu umuntu esize laye limxhase lapho elimxhasa khona.....ngiyabonga bakithi, ngiyabonga sizwe sikaMzilikazi loMambo, ngiyabonga kakhulu,” kutsho uMadlela.